“Messi wax badan ayuu iga caawiyay kobcinta shaqsiyadeyda” – xiddig ka tirsan Barcelona – Gool FM
(Barcelona) 15 Nof 2019. Mid ka mid ah xiddigaha ugu muhiimsan kooxda Barcelona ayaa wuxuu si cad u sheegay in Lionel Messi uu si weyn kaga caawiyay kobcinta shaqsiyadiisa.
Weeraryahanka reer Uruguay iyo kooxda Barcelona ee Luis Suarez ayaa xaqiijiyay in saaxiibkiis Lionel Messi uu ka caawiyay wax badan kobcinta shaqsiyadiisa tan iyo markii uu yimid garoonka Camp Nou xagaagii 2014.
Luis Suarez ayaa wuxuu sheegay in xiriirka kala dhexeeya Lionel Messi uu dhaafay gudaha garoonka, kaddib mudo aad u dheer oo waayo qurux badan ay ku qaateen garoonka Camp Nou.
Suarez ayaa wareysi uu siiyay Telefishanka rasmiga ah ee kooxda Barcelona wuxuu ku sheegay:
“Messi wax badan ayuu iga caawiyay kobaca shaqsiyadeyda, waxaa leenahay xiriir aad u dhow tan iyo imaatinkeyga kooxda Barcelona, laga soo bilaabo wada noolaanshaha ilaa saaxiibtinimada iyo daqiiqadaha aan isaga la qaato, sidoo kale waxay dhaaftay cowsa garoonka”.
“Wuxuu ii muujiyay saaxiibtinimo kun jeer, wuu i caawiyay, markii aan u tartamayay Kabta Dahabka iyo waliba tartammada”.
“Qof walba wuu ogyahay inuu yahay kan adduunka ugu fiican, wuxuu cadeeyay arrintaas, wuuna sii wadaa cadeynta maalinba maalinta ka dambeysa”.